Ra’isul wasaare Kheyre oo la kulmay madaxda wadamada Canada iyo Ruwaanda (sawirro) | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’isul wasaare Kheyre oo la kulmay madaxda wadamada Canada iyo Ruwaanda (sawirro)
Ra’isul wasaare Kheyre oo la kulmay madaxda wadamada Canada iyo Ruwaanda (sawirro)
Isaga oo ka qeyb galaya shir looga hadlayo dhaqaalaha adduunka oo ka socda wadanka Switzerland ayuu ra’isul wasaare Xasan Cali Khyre la kulmay dhowr waddan madaxdooda waxa uuna si gaar ugu bandhigay sida ay Soomaaliya u daneyneyso wadamadaas xiriirkooda.
Dhowr wadan ayuu la kulmay madaxdooda iyagoo is dhaafsaday xiriiro laba geesood ah oo ku dhisan ixtiraam, waxaana madxda uu la kulmay kamid ah Maamulaha Bangiga adduunka Kristalina Georgieva, Ra’iisul wasaaraha Norway Erna Solberg, Raiisal wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka arrimaha dibada Dalka Qatar Sheikh Muhammad Abdulrahman Al Thani , Ra’isul wasaraha Canada iyo Madaxweynaha wadanka Kigali.
“Waxaan kulan la qaatay Ra’iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau, waxaan ka wada hadalnay adkeynta iyo dardar gelinta xiriiirka ee labada dal”. ayuu yiri Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre mar ay kulmeen isaga iyo Ra’isul wasaraha Canada.
Dhanka kale waxa uu sheegay Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre in uu la kulmay Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame waxa uuna sheegay in ay ka wada hadleen arrimaha dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo horumarka guud ahaan qaaradda Afrika iyo sidii Soomaaliya iyo Rwanda xiriir dhow u yeelan lahaayeen.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaaleysa sidii ay u soo celin laheyd xiriirkii kala dhexeeyey dunida inteeda kale, waxaana dhammaan kulamada Ra’isul wasare Kheyre eey qeyb ka yihiin xoojinta xiriirka arrimaha dibadda Soomaaliya..
Previous articleDowladaha Norwey iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee u dhexeeya (sawirro)
Next articleTrump oo loo jeediyay in uu xayiraadda ka qaado Soomaalida..